Hevitra · Marsa, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Hevitra · Marsa, 2011
Tantara mikasika ny Hevitra tamin'ny Marsa, 2011
Japana: Ireo lesona mikasika ny fitantanana ny krizy amin'ny fifaneraserana amin'ny vahoaka, omen'i Edano, Mpitantsoratry ny Governemanta
Tian'ny manampahaizana amin'ny Fifandraisam-bahoaka Takashi Kurosawa ny fomban'ity lehilahy ity, milaza amin'ny antsipirihany ny zavatra tsara ataon'i Edano ao amin'ny lahatsoratry ny bilaogy "ireo zavatra 10 Fianatra amin'ny Mpitantsoratry ny Governemanta Edano mikasika ny Fifandraisam-bahoaka eo amin'ny Fahaiza-mandinika ny Fitantanana ny Krizy" (枝野官房長官から学べる10のこと：危機管理広報の視点から).
Côte d'Ivoire: Inona no vahaolana amin'ny krizy taorian'ny fifidianana?
Tsy misy fiovana mihitsy ny krizy iainan'i Côte d'Ivoire taorian'ny fifidianna filoham-pirenena fihodinana faharoa natao ny 28 novambra 2010 izay nifanandrinan'i Laurent Gbagbo sy i Alassane Ouattara izay samy milaza fa nandresy. Misesisesy ny trangan-javatra tsy ampoizina [fr] , ary tahaka ny tsy hisy vahaolana mihitsy izany. Ohatry ny hijanona...
Azia Atsinanana 07 Marsa 2011
Tamin'ny 14 Febroary 2011, ilay poety Xiao Zhao 25 taona dia namono tena tamin'ny fitsambikinana teo ambonin'ny tetezana akaiky ny tranony ao amin'ny farintanin'i Hunan. Raha nisarika ny sain'izao tontolo ilay olo-malaza Han Han teraka taorian'ny taona 80 ka nanjary iray tamin'ireo ” 50 be mpakafy indrindra eran-tany tamin'ny 2010″, ny andro...